It is me. Ko Niknayman.: သူတို့ လည်းဘဲ နအဖအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာပါတယ်။
ဒီပုံတွေမှာကတော့ တေဇရဲ့ညာလက်ရုံးလူ (မျက်မှန်တပ်ထားသူ)ဦးလု (U Lu) ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ဦးလုဟာအ မေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး Daly မြို့ မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူနဲ့ သူ့ မိန်းမဟာ မြန်မာပြည် မှာ နေထိုင်နေကြပြီး၊ သူရဲ့ သမီး စီစီလီ (Cicily)ကတော့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ တေဇ ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို ဦးလုရဲ့ဘဏ် account ထဲကတစ်ဆင့် အမေရိကကို ပိုက်ဆံလွဲပေးနေတယ်လို့သိရှိ ရပါတယ်။ ဒီ့အတွက် အမေရိကရဲ့sanction list နဲ့visa ban ထဲမှာ ဦးလုတို့ မိသားစုကို ထည့်သွင်းသင့် ပါ တယ်။
ဒီပုံထဲက မိန်းကလေးကတော့ ပိုင်ဖြိုးတေဇနဲ့ထက်တေဇတို့ ရဲ့မောင်နှမ၀မ်းကွဲ ဖြစ်သူခိုင်ချိုမြင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ခိုင်ဇော် (ခ)မခိုင် ဟာ တေဇလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ တုန်းကထိုင်း ဗိုလ်ချုပ် တွေ အမတ်တွေနဲ့ ရောထွေးဆက်ဆံခဲ့သူလို့ ဘန်ကောက်ပို့ စ်သတင်းစာမှာနာမည်ကြီးခဲ့သူပါ။ ဒေါ် ခိုင်ဇော်ဟာ အမေရိကရဲ့sanction list ထဲမှာ ပါပေမယ့် သူရဲ့သမီးတွေကတော့ မပါပါဖူး။ ခိုင်ချိုမြင့်တို့ ညီ အစ်မတွေဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။ သူအမေရဲ့ငွေကြေးတွေကို သမီးတွေ ရဲ့ ဘဏ် account ထဲကနေ အမေရိကမှာ လွဲပြောင်းနေတဲ့အတွက် sanction list ထဲမှာ ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ အမည် ပါသင့်ပါတယ်။
ဒီဓါတ်ပုံထဲက အလယ်ကမိန်းကလေးဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးမြဟန်ရဲ့ သမီးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမြဟန်ဟာတေ ဇတို့ နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိနေသူပါ။ ဒီမိန်းကလေးဟာကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပါ တယ်။ သူ့ ကိုလည်း sanction list ထဲမှာ ထည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီဓါတ်ပုံထဲက အလယ်ကတစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ သားဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုး တေဇ တို့ နဲ့နီးကပ်စွာပေါင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 10:07 PM